🥇 Google Na-ahapụ URL Shortening In Chrome - ar Comparison】
Google Chromecast, Unyi, Gwuo ọdịnaya na-asọ asọ
Ihe egwuregwu niile n’otu ebe. Kpọọ ihe nkiri, ihe nkiri onyonyo na nsonye, ​​TV dị ndụ, vidio vidio na vidiyo gụgharia na TV gị site na ngwaọrụ ndị ezinụlọ gị. 1
Google hapụrụ URL na-eme mkpụmkpụ na Chrome
Emily Stark, injinia ngwanrọ na ndị otu Chrome dere na post June 7, "Nnwale a edoghị usoro nchekwa dị mkpa, yabụ na anyị anaghị ebupụta ya."
Ndị uwe ojii gam akporo mere akụkọ izizi na ihe Stark dere na June 10.
Nkwupụta Stark, nke rụtụrụ aka na ihe Chromium, ọrụ mmeghe nke na-ewepụta koodu maka Chrome na ọtụtụ ihe nchọgharị ndị ọzọ, gụnyere Edge Microsoft, nke a na-akpọ nnwale "obere ngalaba", kwụsịrị mbọ iji belata ya. Nke pụtara na adreesị ihe nchọgharị ahụ. . Bipụta.
Na August 2020, Google kwupụtara, Stark bụ otu n'ime ndị injinia atọ dere nkwupụta ahụ, na ya ga-anwale ụfọdụ ndị ọrụ Chrome na ha ga-ezo nnukwu akụkụ URL URL. Echiche ahụ, dị ka Google si kwuo, bụ igbochi mwakpo phishing.
"Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ ịghọta, site n'iji ya eme ihe, ma ị na-elele URLs n'ụzọ dị otu a na-enyere ndị ọrụ aka ịghọta na ha na-eleta weebụsaịtị ọjọọ ma chebe ha pụọ ​​na mwakpo aghụghọ na mmekọrịta mmadụ na ibe ya," ka ndị injinia ahụ kwuru.
Ule malitere na Chrome 86, ewepụtara na mbido Ọktoba 2020.
Kama igosipụta URL zuru ezu, Chrome etinyela ya na ihe Google kpọrọ "ngalaba a na - edebanye aha" ma ọ bụ akụkụ ya kachasị mkpa. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na URL zuru ezu nke, dịka ọmụmaatụ, a Kọmputaworld isiokwu bụ https://www.LaComparacion.com/article/3082024/google-android-chrome-os-flip-flops.html, mgbe ahụ ngalaba a na-edebanye aha, na naanị otu mmewere nke a ga-egosipụta na mmanya adreesị, ọ ga-abụ LaComparacion.com. N'ime ime nke a, echere na URL ndị na-anwa ịzobe ngalaba ahụ site na ijuputa ezigbo adreesị na, ịgbaso otu ihe atụ ahụ, LaComparacion.com n'ebe ọzọ na eriri ogologo, ga-ekpughe.
Na nsụgharị dị iche iche nke Chrome na-amalite na 86, ndị ọrụ nwere ike ime ka URL dị mkpụmkpụ site na ntọala na chrome: // flags nhọrọ peeji ma ọ bụrụ na Google ahọrọghị ha ka ha sonye kama ọ chọrọ ịhụ mgbanwe maka onwe ha.
Ikekwe ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, ụfọdụ kọchara mgbanwe ahụ; Ndị ọrụ na-eme ihe nchọgharị ọ bụla na-ejikarị ọkụ na ndụdụ mgbe ọ bụla njirimara ọrụ ogologo oge (UI) ma ọ bụ ahụmịhe ọrụ (ahụmịhe onye ọrụ) ga-agbanwe ma ọ bụ wepu.
Malite na Chrome 91, nke ewepụtara na May 25, ihe nchọgharị ahụ na-ewepu https: // na URL na nhọrọ chrome: // ọkọlọtọ adịkwaghị.
Ihe nchọgharị ndị ọzọ, gụnyere Apple's Safari, na-aga n'ihu iji URL ndị dị mkpụmkpụ, naanị ngalaba Google jụrụ ugbu a. Agbanyeghị, Edge anabataghị ule nke Chromium rụpụtara wee gaa n'ihu na -emepụta adreesị zuru ezu (gụnyere https: //).